A na-ezobe ozi ọma na UNWTO na nzuzo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » A na-ezobe ozi ọma na UNWTO na nzuzo
Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Ajụjụ Ọnụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onweghi onye ekwenyere ka o kwue banyere ya na Madrid na Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO). Zurab Pololikashvili, odeakwụkwọ ukwu nke ụlọ ọrụ UN jikọtara ọnụ nwere asọmpi.
Pololikashvili atụghị anya na onye ọ bụla ga-enwe ike imeghachi oge iji zọọ ya na ntuli aka nke 2021 na-abịa. Na Septemba o mere ka windo dị mkpụmkpụ maka nhoputa site na Machị ruo Jenụwarị (2020). Nkọwa ya bụ inwe nzukọ ịtụ vootu Executive Council ka ha na-esonye na FITUR njem ụlọ ọrụ ahia na-egosi na Madrid
Deepak Joshi, onye bụbu onye isi nke Nepal Tourism Board gwara eTurboNews N'ajụjụ ọnụ a mere n'oge na-adịbeghị anya: “Achọrọ m atụmatụ itinye onwe m n'ọkwa dị ka onye ga-azọ ọchịchị, ma ọ dịghị nnọọ oge zuru ezu iji mee nke a n'ịtụle ụwa ma ọ bụrụ na e nwee ọrịa na-efe efe.”
Omume ziri ezi nke Zurab Pololikashvili ga-abụrịrị ịhapụ ọtụtụ oge na oge na-adịghị obere maka ndị aga-abata.
A kagbuo FITUR maka Jenụwarị, mana UNWTO Secretary General ka na-edebe ụbọchị Jenụwarị maka nzukọ ịtụ vootu. Ọ bụ kpọmkwem ihe ọ chọrọ, na eTurboNews kpọrọ ya zuru okè ojoro
Oruola otu izu ugbu a, onwebeghị ọkwa mgbasa ozi sitere n'aka UNWTO gbasara asọmpi ahụ site na Bahrain enyere. HE Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa nke Bahrain debara aha ya n'akwụkwọ maka onye odeakwụkwọ ukwu na izu ụka gara aga.
UNWTO weputara akwukwo mgbasa ozi ụnyaahụ banyere Secretary General ka ọ kwughachiri nkwa ya na ya na gọọmentị nke Brazil na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyere aka na ngalaba ndị njem nke mba ahụ gbakee ma bụrụ isi ihe ga - eme ka mmepe na-aga n’ihu. Nkwupụta nkwado ahụ bịara ka Maazị Zurab Pololikashvili duuru ndị nnọchi anya UNWTO iji zute Onye isi ala Jair Bolsonaro na Mịnịsta nke njem nleta Marcelo Álvaro Antônio.
Brazil bụ onye otu Executive Council ma tụọ vootu na ntuli aka na-abịa na Jenụwarị. Naanị 1 / 5th nke ndị òtù UNWTO niile nwere ike ịtụ vootu maka Secretary General.
Ọ na-akọwa ihe kpatara mba 35 jiri bụrụ ebe nlebara anya maka onye ndu UNWTO a. Ọ bịara doo anya ihe kpatara nleta a na Brazil ji dị mkpa.
Ọtụtụ narị ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa n'ụlọ ọgwụ na UK nwere ...